Bloopers | Slot Maalmihii £ 5 + £ 500 FREE! Bloopers | Slot Maalmihii £ 5 + £ 500 FREE!
Tani waa cusub online ah site bixinta SMS naadi bilaabay by istuudiyaha Elk. movie Kaapelitalo Bloopers Tani waa playable dhamaan qalabka smart. Iyadoo soundtracks orchestral, duntu ka mid ah oo dhan sawirka filimka la xiriira. Waa ciyaar xiiso Afyare oo bixiya qaar ka mid ah muuqaalada gunno aad u fiican.
Play iyo Win in boosaska New site bixinta SMS
ciyaarta Afyare Tan waxay ka timaaddaa la 5 duntu, 3 saf iyo dalabyo 243 siyaabo in ay wax guul ah. Waxa kale oo jira video fiican hordhaca ah in ka hirgelisey goobta kulanka Afyare iyo barayaa characters kala duwan si ay ciyaartoyda. Ciyaartoyda bilaabi kartaa gameplay la bet ugu yar oo ah £ 0.25 iyo bet ugu badnaan £ 100.00. Tani boosaska goobta bixinta SMS sidoo kale bixisaa Ghanna ee ku saabsan 600x saamiga ciyaaryahanka.
Afyare cusub wuxuu ka kooban yahay calaamadaha qiimaha sare sida lab iyo dhaddig xiddigaha hogaanka, duntu ka mid ah filimada iyo guddiga Clapper a. Dhanka kale, 10, J, S, K, iyo A waxaa loo tixgeliyaa sida qiimaha hoose. Astaanta duurjoogta ah waxaa lagu sawiray Wild Bloopers logo. Waxaa bedeli doona oo dhan calaamado kale marka laga reebo calaamad gunno ah. Halka calaamad bonus waa 'Walk of Fame' xiddigaha iyo this kiciya feature ugu muhiimsan.
Ku raaxayso Features Bonus la site bixinta boosaska SMS
Tani aan kala sooc lahayn u muuqataa ka dhigeeysa xor ah oo ciyaarta saldhig gudahood. Waxaa ku saabsan tahay 5 characters Blooper kala duwan oo ku wareegaan dul duntu iyo sidoo kale ku Abaal marinaa mini-gunooyin sida soo socota:
Tech Sound- Blooper Tani meelo wilds dheg dul duntu iyo abaalmariyo wareejin ah oo lacag la'aan ah.
In Free dhigeeysa:
xayaysiin Man- Blooper Tani waxay ku wareejinaya wilds gelin wilds ballaariyo.
magaabay wiil- Blooper Tani abaalmariyo ah 'calaamadaha dhacaya' in sameysmi karaa isku guusha cusub.
Isqurxin- Blooper Tani abaalmariyo ka dhigeeysa dheeraad ah oo lacag la'aan ah.
Hagaajin-Waxaa- Blooper Tani guuro calaamadaha ku wareegsan si loo abuuro isku guuleystay.
dhigeeysa Free aad shaqeysiin doonaan by degtey 3 ama xiddigaha gunno dheeraad ah ka bidix ilaa midig ku dul duntu ku. Mid kasta oo ka xiddigaha tusi doonaa logo for Blooper gaar ah. Sidoo kale, kuwaas oo noqon doona inta lagu guda jiro firfircoon free wareega dhigeeysa.